OTU ESI ESI TINYE FLASH PLAYER NA YANDEX BROWSER - YANDEX - 2019
Mgbe ụfọdụ "Onye njikwa ngwaọrụ" Ihe nwere aha nwere ike gosipụta. Ngwaọrụ Amaghi ma ọ bụ aha izugbe nke ụdị ngwá ọrụ nwere akara ngosi na nso ya. Nke a pụtara na kọmputa enweghi ike ịchọpụta ngwá ọrụ a nke ọma, nke nke a na-eduga n'eziokwu na ọ gaghị arụ ọrụ ọ bụla. Ka anyị chọpụta otu esi edozi nsogbu a na PC na Windows 7.
Hụkwa: Njehie "Ejighị ngwaọrụ USB" na Windows 7
Fọrọ nke nta mgbe niile, njehie a pụtara na ọ bụghị na kọmputa ka a na-arụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa ma ọ bụ na arụnyeghị ha na-ezighi ezi. Enwere otutu ngwọta maka nsogbu a.
Usoro 1: "Ọkachamara nrụnye ngwanrọ"
Nke mbụ, ị nwere ike ịnwale iji dozie nsogbu ahụ "Ọkachamara nwụnye nrụnye ngwanrọ".
Pịa na Win + R keyboard na pịnye okwu na window nke meghere:
Mgbe ịbanye na pịa "OK".
Na windo mmalite mmalite "Nna ukwu" pịa "Na-esote".
Mgbe ahụ, jiri bọtịnụ redio, họrọ ihe ngwọta maka nsogbu ahụ site na nyocha ma wụnye ngwa ngwa, wee pịa "Na-esote".
Nchọpụta maka ngwaọrụ amaghi ama ejiri malite. Mgbe a chọpụtara ya, a ga-arụ ọrụ mmemme na-akpaghị aka, nke ga-edozi nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na anaghị ahụ ngwaọrụ, na windo "Nna ukwu" A ga-egosipụta ozi kwekọrọ ekwekọ. Omume ọzọ na-adaba adaba ịmepụta naanị mgbe ị maara ụdị ngwá ọrụ anaghị aghọta. Pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Ndepụta akụrụngwa ga-emepe. Chọta ụdị ngwaọrụ ịchọrọ ịwụnye, họrọ aha ya wee pịa "Na-esote".
Ọ bụrụ na ihe dị na ndepụta ahụ na-efu, họrọ "Gosi ngwaọrụ niile" wee pịa "Na-esote".
N'akụkụ aka ekpe nke window ahụ meghere, họrọ onye nrụpụta nsogbu ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, na ebe kwesịrị ekwesị nke interface ahụ, ndepụta nke ụdị ọ bụla nke onye nrụpụta ahụ, ndị ọkwọ ụgbọala ya nọ na nchekwa data, meghere. Họrọ nhọrọ achọrọ wee pịa "Na-esote".
Ọ bụrụ na ịchọtaghị ihe achọrọ, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ ahụ "Wụnye site disk ...". Mana nhọrọ a bụ naanị maka ndị ọrụ ahụ maara na ọkwọ ụgbọala achọrọ na PC ha ma nwee ozi nke edere ya.
Na windo nke mepee, pịa "Nyochaa ...".
Achịchọ faịlụ faịlụ ga-emeghe. Gaa na ya na ndekọ ahụ nke nwere ọkwọ ụgbọala. Ọzọ, họrọ faịlụ ya na ntinye INI wee pịa "Meghee".
Mgbe ụzọ na faịlụ ọkwọ ụgbọala na-egosipụta na "Detuo faịlụ site na diski"pịa "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịlaghachi na window "Nna ukwu"pịa "Na-esote".
A ga-eme usoro nhazi ịkwọ ụgbọala, nke kwesịrị iduga ngwọta nke nsogbu ahụ na ngwaọrụ amaghị.
Usoro a nwere ụfọdụ ihe ndabara. Ndị isi bụ na ọ dị mkpa ka ị mara kpọmkwem ihe nke akụrụngwa nwere "Onye njikwa ngwaọrụ", dị ka onye a na-amaghị aha, enweela ọkwọ ụgbọala na kọmputa ma nweta ozi gbasara ndekọ kpọmkwem ebe ọ dị.
Ụzọ kachasị mfe iji edozie nsogbu ahụ kpọmkwem "Onye njikwa ngwaọrụ" - nka bu imelite nhazi nhazi. Ọ ga - eme, ọbụlagodi na ị maghị nke akụrụngwa na - ada. Ma, ọ dị mwute ikwu na usoro a anaghị arụ ọrụ mgbe niile. Mgbe ahụ ịkwesịrị ịchọ ma wụnye ọkwọ ụgbọala ahụ.
Ihe omumu: Otu esi mepee "Onye njikwa ngwaọrụ" na Windows 7
Pịa aka nri (PKM) site na aha ahaghi ama na "Onye njikwa ngwaọrụ". Na menu na-egosi, họrọ "Nhazi nhazi ...".
Mgbe nke a gasịrị, a ga-emezi nwelite nhazi site na ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere na ihe a na-amaghị ama ga-ebute n'ụzọ ziri ezi na usoro.
Nhọrọ ahụ dị n'elu dị mma naanị mgbe PC nwere ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa, mana maka ụfọdụ ihe kpatara nrụnye mbụ ha na-etinyeghị ha. Ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala na-ezighị ezi arụnyere na kọmputa ma ọ bụ na ọ nweghị kpam kpam, algorithm a agaghị enyere aka idozi nsogbu ahụ. Mgbe ahụ ịkwesịrị ime ihe ndị a na-atụle n'okpuru.
Pịa PKM site na aha ihe omumaghi na window "Onye njikwa ngwaọrụ" ma họrọ otu nhọrọ "Njirimara" site na listi egosipụta.
Na windo nke mepee, tinye mpaghara "Nkọwa".
Ọzọ, họrọ site na listi ndepụta "ID ID". Pịa PKM Dị ka ozi gosipụtara n'ógbè ahụ "Ụkpụrụ" na na ihe onodu ozo nke choro, họta "Detuo".
Mgbe ahụ i nwere ike ịga na saịtị nke otu n'ime ọrụ ndị na-enye ike ịchọọ ndị ọkwọ ụgbọala site na NJ hardware. Dịka ọmụmaatụ, DevID ma ọ bụ DevID DriverPack. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịbanye ụdị ID ngwaọrụ ndị a depụtara na mbụ, malite search, budata ọkwọ ụgbọala dị mkpa, wee wụnye ya na kọmputa. A kọwara nkọwa a n'ụzọ zuru ezu na isiokwu dị iche iche.
Ma anyị na-adụ ọdụ otu ihe ahụ iji budata ndị ọkwọ ụgbọala site na saịtị ọrụ nke onye nrụpụta ngwaike. Iji mee nke a, ị ghaghị ibu ụzọ kọwaa ihe enyemaka weebụ a. Tinye akara njirimara NJ dị na igbe nchọta Google ma gbalịa ịchọta ihe nlereanya na emeputa nke ngwaọrụ a na-akọwaghị na mmepụta. Mgbe ahụ n'otu ụzọ ahụ site na search engine chọta ụlọ ọrụ gọọmentị nke onye nrụpụta ma si n'ebe ahụ budata onye ọkwọ ụgbọala ahụ, wee malite ịtọnye ihe ntinye ya ma wụnye ya n'ime usoro.
Ọ bụrụ na ịmegharị ọchụchọ ahụ site na ID ID dị ka ihe mgbagwoju anya maka gị, ị nwere ike ịnwale iji mmemme pụrụ iche iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Ha ga-iṅomi kọmputa gị wee chọgharịa Ịntanetị maka ihe ndị na-efu na ntinye aka ha n'ime usoro. Na ime ihe niile a, ị ga-achọ naanị otu pịa. Ma nhọrọ a ka dị ka ihe a na-atụkwasị anya dị ka algorithms akwụkwọ ntuziaka a kọwara na mbụ.
Esi melite ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa gị site na iji DriverPack Solution
Ihe mere e ji ebido ụfọdụ ngwá ọrụ na Windows 7 dị ka ngwaọrụ a na-akpọghị, ọtụtụ mgbe bụ enweghị ndị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ nkwụnye nrụzi ha. Ị nwere ike idozi nsogbu a "Ọkachamara nwụnye nrụnye ngwanrọ" ma ọ bụ "Onye njikwa ngwaọrụ". E nwekwara nhọrọ nke iji software pụrụ iche iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka.